मुख्य पृष्ठHealth Tips सौन्द्धर्य स्वास्थ्य जीवनशैलीदसैँमा कस्तो मेकअप गर्ने ?
विराटनगर, ९ कात्तिक । दसैँमा आफ्नै घरमा वा आफन्तकोमा टीका थाप्न जाँदा, राम्रो पहिरन र सुुहाउँदो मेकअप गर्न हरेकले सोचेका हुन्छन् ।
टिकाको दिन सबैलाई राम्रो लुगा तथा राम्रो शृंगार गरेर राम्रो देखिन मन लाग्छ । टीका लगाउन आफन्तकोमा जाँदा अनुुहार र शरीरमा पसिना आएर मेकअप मेटिने र अनुहार थाकेको देखिने सम्भावना हुन्छ । झन् अहिलेको समयमा कोरोनाबाट बच्नका लागी माक्स लगाउनु अति आवश्यक हुन्छ । मेकअप सबै मास्कमा टासिने डर पनि धेरै को हुन्छ ।
तर, राम्रो कसरी देखिने त ? मास्क लगाएपनि मेकअप कसरी नटासिकन टिकाइरहने ? यस प्रश्नले सबैलाई निकै चिन्तित बनाएको हुन्छ । मेकअपको सामान्य ज्ञान राखेर यो पालीको दसैँमा आकर्षक देख्न सकिन्छ ।
दसैँको दिन मेकअप गर्दा दिनभरि टिक्ने र मास्क लगाँउदा पनि नटासिने गरी मेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ । मेकअप माथि मास्क लगाउँदा तेलका छिद्र र ग्रंथिहरू बन्द हुने कारण पिम्पल आउने वा भएको पिम्पललाई थप खराब बनाउने सम्भावना बढी हुन सक्ने विराटनगरस्थित भेनस स्किन एण्ड हेयर ट्रान्सप्लाण्ट क्लिनिकका छाला तथा कपाल विशेषज्ञ डाक्टर तपन प्रधान बताउँछन् ।
मेकअप गर्नु अति आवश्यक रहेको खण्डमा नन कमडोजेनिक (जसले छालाको रौँ छिद्रहरूलाई बल्क गर्दैन) वा तेल मुक्त लेबल रहेका उत्पादनहरूको मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । छालामा नयाँ मेकअप कम्पनीको उत्पादन प्रयोग गर्नु सावधानी अपनाउनु पर्छ । अनुहारमा सुट नहुने नयाँ उत्पादनहरूको प्रयोगले छालामा एलर्जि निम्त्याउन सक्छ ।
अनुहारलाई सुट हुने मोइश्चराइजरको प्रयोगले सुख्खापन र एक्ने ब्रेक आउट्सलाई रोक्न सकिन्छ । मास्क लगाएर कोरोनाबाट जोगिएपनि सानो लापरवाहीले पनि अनुहारको छालामा समस्या निम्तयाउन सक्ने हुँदा मेकअप गर्नु अगाडि राम्रो मोइश्चराइजर र सन्सक्रिमको प्रयोग गर्नु पर्छ ।
हालको समयमा वाटरप्रुफ मेकअप गर्नु राम्रो हुन्छ । रातो टिकाले राम्रो देखाउँने हुँदा सामान्य मेकअपले पनि निकै राम्रो देखिन सक्छ ।
मेकअपको साथै लुगा र हेयर स्टाइललाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । विराटनगर स्तिथ इन्टरनेसनल ट्रेनिङ सेन्टरकी ब्युटिसियन सीता घिमिरे रातमा अगाडी मेकअप हटाएर सुत्ने बानी बसाल्नु पर्छ । नत्र छालामा विभिन्न समस्या आउन सक्छ ।